Taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka DFS oo lagu dhaawacay Muqdisho
Muqdisho:-Taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka ee DFS Jen. Cali Xirsi Barre (Cali-gaab) ayaa saaka waxaa soo gaaray dhaawac fudud ka dib markii askari ka tirsan DFS oo ay isbaaro u tiilay jidka 21-Oktoobar uu rasaas ku furay taliyaha waxaana dhaawaca Jen Cali Xirsi Bare la geeyey Isbitaalka isbitaalka Daarul-shifa .
Taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka ee DFS Jen. Cali Xirsi Barre (Cali-gaab) ayaa shaqaaqada ka dib la hadlay saxaafada wuxuuna sheegay in uu soo gaaray dhaawac fudud uuna bad qabo isaga oo beeniyey in dhaawaciisa uu yahay mid culus ama in uu dhintay sida ay baahiyeen qaar ka mid ah saxaafada ka howlgasha magaalada Muqdisho.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in askarigii dhaawacay taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka ee DFS Jen. Cali Xirsi Barre (Cali-gaab) uu baxsaday waxaana ku daba jira ciidamada DFS sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka nabadsugida ee DFS.
Maalmahan ayaa waxaa ka socday magaalada Muqdisho howlgalo lagu sugayo amaanka kuwaas oo lagu qaaday isbaarooyin daadsanaa gudaha magaalada Muqdisho iyo gobalka Shabeelaha Hoose ka dib markii madaxweynaha DFS Dr.Xasan Sheekh Maxmuud uu amar ku bixiyey in la qaado isbaarooyinka lagu dhibaateeyo shacabka.